पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका अध्यक्ष नेम्बाङको निधन - Purbeli News
पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका अध्यक्ष नेम्बाङको निधन
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २७, २०७५ समय: १७:५३:४९
पाँचथर / पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका अध्यक्ष अमर कुमार नेम्वाङको शनिबार राती निधन भएको छ । ७७ बर्षिय नेम्वाङ गाउँपालिकाको ५ नं. वडाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएकै बेला वेहोस भएर ढल्नुभएको थियो । सोही स्थानमा प्रारम्भीक चेक जाँच पश्चात उहाँलाई इलाम पु¥याइएको थियो । जिल्ला अस्पताल इलाममा पवनजंग रायामाझीले उहाँको निधन भएको पुष्टि गर्नुभयो । फाल्गुनन्द गाउँपालिकाकै अस्थायी सेवा केन्द्र नजिकै रहेको वडा नं. ५ फाक्तेपको कार्यालय घुर्बिसे पञ्चमीमा आयोजना भएको ३ दिने क्षमता विकास तालिममा प्रमुख अतिथीको रुपमा शुभकामना मन्त्ब्य राखिसकको कुर्सिमा बस्दा अचानक उहाँमा समस्या देखिएको हो ।
कार्यक्रममा उहाँले ५ मिनेट जती बोलेर कुर्सीमा बसेपश्चात अचानक हात खुट्टा तन्किएको र आफुहरुले तत्कालै हातखुट्टा मालिस गर्दै स्वास्थ्य कर्मीलाई बोलाएका थिए । स्थानीय ल्याबका स्वास्थ्य कर्मी असिम न्यौपानेले प्रारम्भिक रक्तचाँप जाँच गरेको बताइएको छ । लगत्तै उहाँलाई थप उपचारको लागी इलाम पु¥याइएको थियो । नेम्वाङ नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट जिल्लाको फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा निर्वा्चित हुनुभएको थियो । नेपाल सरकारले उहाँलाइ भर्खरै सुप्रवल जनसेवा श्री पदक बाट विभूषित समेत गरेको थियो ।
को हुन नेम्वाङ
वि.स.१९९८ सालमा जन्मिनुभएका अमरकुमार नेम्वाङ जिल्लाका सबैभन्दा जेष्ट गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहन्थ्यो । १० वर्ष सम्म भारतको दार्जि्लिङमा अध्यन गर्नुभएका नेम्वाङले अमेरिकाको विकास लाइ समेत नजिक बाट नियाल्नु भएको थियो । करिब ४ बर्ष अमेरिकाका विभिन्न शहरहरुमा बस्नुभएका नेम्वाङ पाँचथरको लिम्बू समुदायबाट पहिलो मास्टर डिग्री पास गर्ने व्यक्तित्वका रुपमा चिनिनुहुन्छ ।
उहाँले सन १९६९ मा राजनीतिशास्त्रमा एम ए पुरा गर्नुभएको थियो । कुशल साहित्यकारका रुपमा चिनिने नेम्वाङ का अमेरिका भ्रमणका केही सम्झनाहरु, सम्झनाका तरेलीहरु, साँझको एक अवसान (कविता संग्रह) प्रकाशित छन् । साविकको पौवासारताप गाविसका ३ पटक गाविस अध्यक्ष भैसक्नुभएका नेम्वाङले उहाँको कार्यकालमा पौवासारतापलाई नमुना गाउँविकास समितिको रुपमा समेत विकास गर्नुभएको थियो । अहिले चौथो पटक भने उहाँ पालिकाको अध्यक्ष बन्नुभएको थियो ।